Muhiimadda iyo kala soocida baakadaha | Abuurista khadka tooska ah
Muhiimadda iyo kala soocida baakadaha
Jorge Neira | | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Ku filan cawlada caadiga ah, laba jibbaaran iyo weel fudud. Waxaan hadda u tagnaa kan ugu casrisan oo ka wada hadalno hab cusub si kor loogu qaado wax soo saarka laga bilaabo waqtiga aad haysato baakadaha ama "muuqaal" midig gacmahaaga.
Maanta waxaan kuu sheegeynaa xirmooyinka caanka ah, hal abuur iyo nidaamka soo bandhigida asalka ahón taasi waxay leedahay wax la mid ah muuqaal kasta oo kale waana inay ka samaysan yihiin warqad ama kartoon. Waxaan aragnay in sheyga aan ku duubeyno sheyga aan u isticmaalno inuu saameyn badan ku yeesho, laakiin hadii aan wax dhihi karno waa taas tani waa kedisá Médhammaan MáWaxaa loo isticmaalaa sida baakadaha
1 Baakadaha waxaa loo isticmaali karaa wax walba
2 Casriga iyo isbadalada naqshadahaaga
3 Faa'iidooyinka baakadaha iyo waxaad u isticmaali karto!
4 Faa'iido-darrooyinka baakadka: Wax walbaa uma wanaagsana sidii la mooday
Baakadaha waxaa loo isticmaali karaa wax walba
Xitaa sanduuq fudud oo buskud ah ama bariis laga keenay Shiinaha, waad isticmaali kartaa e médhammaan baakadahaXitaa waxay u adeegtaa abuurista bandhig asal ah oo ka farxiya isha macaamiil kasta oo arka oo go'aansada inuu iibsado badeecadaada. Intaas waxaa sii dheer, waa mid ka mid ah agabyada ugu badan ee meesha yaal, maadaama aan siin karno qaabka aan dooneyno.
Dhanka kale waxaan daabici karnaa midabka aan ubaahanahay waana shiraac kufilan oo lagu ciyaaro xarfaha, maxaad intaa kabadan codsan kartaa?
Waxa aan maskaxda ku hayno waa inay taasi tahay wax aad u fácil of isticmaal kaas oo aad ku abuuri karto dhinacyo badan. Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa tusaalooyin ka mid ah raggaas oo aan rajeyneyno inaad jeceshahay oo ku dhiirrigelin doonaan!
Casriga iyo isbadalada naqshadahaaga
Weligaa ma tixgelisay inaad dib u isticmaasho farshaxan garaaf ah dhowr jeer, laakiin bandhigyo kala duwan? Hagaag, jawaabta ayaa ah inaadan mar dambe yeelan doonin madax xanuunkaas maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad dib u warshadayso dhamaan nashqadahaaga.
Hadda, kaliya adoo ku badbaadinaya shaqadaada dhowr jeer, waxaad durba hubineysaa dadaalkaaga marka aad runtii u maleyneyso inay lagama maarmaan tahay in lagu celiyo oo laga dhigo mid dhalaalaya, markaa hadda ku filan in la siiyo a úWaxaan u isticmaalaa oo keliya shuqulladaada oo dhan, dib u warshadaynta.
Faa'iidooyinka baakadaha iyo waxaad u isticmaali karto!
Sanadihii la soo dhaafay, tiro badan ilaha hal-abuurkaón baakadaha ama baakadaha mashaariicda, iyada oo ujeedadu tahay helitaanka kala duwanaanta astaanta.
Ma ahan ilaa dhowaan in shirkadaha waaweyni ay dadaalkooda geliyeen inay horumariyaan mashaariic abuurón, udub dhexaad Baakadaha farshaxanka halka ujeedooyinka ugu dambeeya ay aad u kala duwan yihiin: hel hagaajin iyo waxtar leh oo u turjumaya kharashka hawlgalka oo hooseeya, soo bandhigida xalal waara oo jawi ahaan u habboon, hagaajinta amniga iyo kalsoonida dhammaan hawlgallada, ku dar nolosha iyo asal ahaanta badan
Shirkad waliba waxay leedahay sawirka faraha waxayna ku guuleysataa tan adoo xoojinaya qaab lagu soo celin karo alaabtiisa, laakiin isbedello yar ku yimaada soo bandhigideeda oo had iyo jeer ku jira nuxurka waxa ay sheydu lafteeda tahay.
Faa'iido-darrooyinka baakadka: Wax walbaa uma wanaagsana sidii la mooday
Dhibaatada ugu weyn ee baakidhku waa wareegga nolosha ee gaagaaban, oo loo tarjumay a saameynta sare ee deegaanka, maadaama waxyar uun ka dib abuurkeedii ay noqonayso hadh. Mid kasta oo ka mid ah macaamiisha, hal dhinac ama mid kale, wuxuu hayaa weelka dhowr maalmood illaa iyo inta ay u muuqato inay tahay wax aad u qurux badan ama illaa iyo inta aysan faragelinaynin ku haysashada qolka, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in marka daqiiqadahaas ayaa imanaya, waa wax aad u adag in laga fikiro in deegaanku aanu qaadan doonin dhibaatada.
Sababaha ilaalinta awgeed, tusaale ahaan, gaadhigii oo dhanón qashinka wuxuu leeyahay meerto nololeed aad u dheer, si loo hubiyo joogtaynta ugu badan loona yareeyo raadadka kaarboonka iyo qiiqa CO2 labadaba silsiladaha sahayda ee ka baaraandegaya iyo codsiyada lagu beddelayo. Bulshooyin aad iyo aad u tiro badan ayaa waxaa kiciya a wacyiga deegaanka ku kordhaya macaamiisha, ku dar fikradan siyaasadooda daryeelka deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Muhiimadda iyo kala soocida baakadaha
CV asalka ah